Himalaya Dainik » तालिका अनुसार यौ’नसम्बन्धः लिन सकिन्छ दोब्बर ‘आनन्द’ !
याै’न भन्दासाथ मानिसहरूला अनौठो र भ’ड्किलो लाग्न सक्छ, नका’रात्मक लाग्नसक्छ । किनभने हामीकहाँ यौ’नको कुरा गर्नसाथ हामी ला’जले खुम्च’न्छौं । हामीलाई लाग्छ, यौ’न भनेको छा’डा कुरा हुन् । यही भ्र’मका कारण हामी यौ’नको बारेमा खुला चर्चा गर्दैनौ, यौ’नको उन्मुक्त आनन्द लिदैनौं ।
अध्ययनहरुले भन्छ, यौ’नसु’ख नै दाम्पत्य सफलताको प्रभावकारी सूत्र हो । तर, हाम्रो यौ’न जीवन त्यती सु’खमय छैन, जति हुनुपर्ने थियो । त्यही कारण हाम्रो दाम्पत्य रसिलो हुन सकेको छैन् ।
दम्पतीले यौ’नसु’ख कसरी लिने भन्ने कुरामा खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ, नयाँ नयाँ अभ्यास गर्नुपर्छ । यसले उनीहरुको स’म्बन्ध थप प्रगाढ बनउछ । किनभने यौ’नले मा’नसिक र शारी’रिक रुपमा चु’स्त बनाउन सहयोग गर्छ ।
यौ’न तालिका ।अचम्म लाग्नसक्छ के यौ’नका लागि पनि तालिका आवश्यक हुन्छ ? तर, यौ’न तालिका तय गरियो भने त्यसले दाम्पत्यमा रोमाञ्च’कता थपिदिन्छ । त्यतीमात्र होइन, यौ’न जीवनलाई थप आनन्दित बनाउछ ।
यौ’न तालिकाको यो सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो । अन्यथा अस्तव्यस्त जीवनशैली र त’नावपूर्ण माहोलका बीच दिमा’गमा यौ’नको कुरा नै नआउन सक्छ । यौ’नको समय निश्चित भएपछि सबै कुरालाई थाती राखेर पुर्व तयारीका साथ सम्नन्ध राख्न सकिन्छ ।
जब थाहा हुन्छ कि आज राति यति बजे यौ’न क्रि’या गर्ने कार्यक्रम छ, दिनभरी रो’माञ्चित भइन्छ । दिमागमा विभिन्न योजनाहरु बन्न सक्छन् ।नयाँ नयाँ प्रयोग गर्नेबारे सोच्न सकिन्छ । फलस्वरुप याै’नमा रोमा’ञ्चकता दोब्बर बढ्छ ।
इन्टरनेट र प्रविधिले हाम्रो जिन्दगीको अमनचैन नै खोसेको छ । प्रेमको दुई शब्द व्यक्त गर्न श्रीमान-श्रमितीबीच समय नै हुँदैन । यस्तोमा यदि तालिकामा बाँधियो भने एक अर्काको अंगा’लोमा सुमधुर समय बिताउन सकिनेछ । यसले दाम्पत्य जीवनमा अझै प्रगाढता थप्नेछ ।
जब यौ’नका लागि मान’सिक रुपमा पहिल्यैबाट तयार भइन्छ, यसका लागि तयारी गर्न पर्याप्त समय मिल्छ ।
दुई जनामध्ये एक जना यौ’नका लागि आतुर हुने तर अर्कोलाई जोश नआउने सम’स्या पनि अक्सर हुन्छ । तर, दुवैको सहमतिमा तालिका तयार गरिसकेपछि दुवै जना मान’सिक रुपमा तयार हुन्छन् । त्यसैले रातमा कुनै पनि पक्षबाट इन्कार गर्ने सम्भावना रहँदैन । जसले गर्दा याै’नमा दोब्बर सन्तुष्टी प्राप्त् हुन्छ ।
कोरोना भाइरसको सं’क्रमणले विश्वभर महामा’रीका रुप लिएको बेला मानिसहरुमा स्वास्थ्यका बिषयमा अनेक प्रकारका प्रश्नहरु हुन्छन् ।
कतिपयलाई यो बेला शारी’रीक स’म्बन्ध राख्न हुन्छ कि हुन्न ? वा चु म्बन, अकंमाल गर्दा के हुन्छ भन्ने बारे धेरैको प्रश्न छ । कोरोनाको त्रा सले कतिपयले शा रीरिक स म्बन्ध बनाउदा आफुमा पनि सर्छ कि भन्ने ड’र पनि छ। यौ न र यससंग सम्बन्धित केहि प्रश्न र तिनको जवाफ यस्तो छ ।
१. यो बेला यौ नस’म्बन्ध गर्न उपयुक्त छ ?
विवाहित वा लिभिङ टुगेदरमा रहेका जोडिहरुमा एकअर्कालाई कोरोनाको सं’क्रमण छैन भन्ने ढुक्क छ वा चिकित्सकबाट प्रमाणित छ भने यस्तो अवस्थामा शा’रीरिक स’म्पर्क राख्दा कुनै अस’र पर्दैन ।
तर कोहि एक पार्ट’नरमा को’रोना वा यससंग मिल्दो लक्षण देखियो भने त्यसबेला शा’रीरिक सम्ब’न्ध मात्र होइन दुबै बिच दुरी समेत बनाउनु पर्दछ ।
पक्कै पनि चु’म्बनबाट को’रोना सर्दछ । चु’म्बन मात्र नभई हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा वा सामुन्नेमा रहेको मानिसले खो’क्दा कोरो’ना सर्दछ । त्यसैले यो बेला जतिसुकै भरपर्दो पा’र्टनर भए पनि चु’म्बन नगर्नु नै उत्तम हुन्छ ।
तर कोहि ब्यक्तिलाई तपाई चु’म्बन गर्नु भएको छ भने तत्काल आफुलाई आइसोलेसनमा राख्नुहोस् । आफ्नो स्वास्थ्य लक्षणहरुमा निगरानी गर्नुहोस् । यदि १४ दिन भित्र कोरोनाको लक्षण देखिए तत्काल उपचारमा जानुहोस् ।
यहाँ मुख्य प्रश्न को’रोना भा’इरसको संक्र मणलाई कण्डमले रोक्छ वा रोक्दैन भन्दा पनि शारी’रिक सम्र्प’कका बेला गरीने अरु क्रियाकिलापबाट कोरो’ना सर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनु पर्दछ ।
क ण्डमको प्रयोग गर्दै संक्र’मितबाट को’रोना सर्दैन भन्ने हुदैन । क ण्डमले यौ नागंमा हुने सं’क्रमण बचाउँछ तर यौ न क्रि याकलापका समयमा हुने अन्य गतिविधिबाट को’राना सर्ने संभावना उच्च हुन्छ । तसर्थ क ण्डम लगाउदैमा को’रोनाको सं’क्रमण हुनबाट बच्न सकिदैन ।